လေယာဉ်တွေရှိတယ် ဒရုန်းတွေရှိတယ် လက်နက်တွေရှိတယ် ဒါပေမယ့် ရန်သူ(စခ)တွေရဲ့ အားနည်းချက်ကဘာလဲသိလား…??? – စွယ်စုံသုတ
လေယာဉ်တွေရှိတယ် ဒရုန်းတွေရှိတယ် လက်နက်တွေရှိတယ် ဒါပေမယ့် ရန်သူ(စခ)တွေရဲ့ အားနည်းချက်ကဘာလဲသိလား…???
– ေလယာဥ္ေတြ ရွိတယ္
– ဒ႐ုန္းေတြရွိတယ္ ဒါေပမယ့္ နည္းပညာနဲ႕ တကယ့္လုပ္နိုင္တဲ့ အတတ္ပညာမရွိသူေတြ ျဖစ္ေနတယ္..
အေၾကာင္းက PDF ေတြကို ဆိုက္ဝါးသတင္းနဲ႕ ခဲပ စ္ၿပီး ႀကိဳၾကားေလာက္ ေလးေတြပဲ သတင္းရသေလာက္ဖမ္းနိုင္တယ္ သူတို႔ တကယ္သာ ဖမ္းခ်င္တယ္ ၿဖိဳခ်င္တယ္ဆိူရင္ PDF ေတြ ရွိတဲ့ေနရာကို စုံစမ္း ေထာက္ လွမ္းၿပီး ေလယာဥ္နဲ႕ သို႔ ဒ႐ုန္းနဲ႕ တခါထဲ ပ စ္ခ်လိဳ႕ရတယ္..
ထိုအတြက္ သူတို႔မွာ လုပ္နိုင္တဲ့စြမ္းအားနဲ႕ နည္းပညာ အတတ္ပညာ မရွိတာ ေသခ်ာတယ္ဆိုတာ ေအေအနဲ႕ ပြဲမွာ လက္ေတြ႕ သိနိုင္တယ္ အေၾကာင္းက ေအေအ ဘယ္မွာ စခန္းအထိုင္ခ်ေနတယ္ဆိုတာကိုေတာင္ ခုထိ မအလတပ္က ေသခ်ာ မသိဘူး သိလည္း နည္းပညာမရွိေတာ့ တိုက္မရဘူး။..
သူတိူ႕အေၾကာင္းျပတာက ေအေအတို႔ ယခု PDF ေတြဆိုတာ ေတာေတာင္ထဲမွာမို႔ မျမင္ မေထာက္လွမ္းနိုင္လို႔ဟု အေၾကာင္းျပတယ္ အမွန္တကယ္က ဘာမွမတတ္ကြၽမ္းတဲ့ ေကာင္ေတြမို႔ ဒီစကားေျပာၿပီး မလုပ္နိုင္ အေရးနိမ့္ေနတာပဲ ျဖစ္တယ္..
သေဘာက အာဖကန္ကို US ဗူံ းေတြက်ဲတုန္းက ေက်ာက္ဂူထဲမွာ ..ပုန္းေအာင္းေနသူေတြကို ေဖာ က္ထြင္း ေလဆာနဲ႕ရွာေဖြၿပီး ဂူနံရံေတြပါ ေပါက္ထြက္တဲ့ ဗုံ းေတြကို အသူံးျပဳခဲ့ၾကသလို အီရက္မွာ မီးေလာင္ ဗုံ းေတြနဲ႕ တျပင္လုံး က်ဲခ်ၿပီး ရနိသူကို သုတ္သင္ ရွင္းလင္းခဲ့ၾကတယ္ အဲ့လိုနည္းပညာနဲ႕ လ က္န က္ေတြ စကစမွာ မရွိဘူး ေသ ခ်ာတယ္။..
သို႔ေပမယ့္ ေလ်ာ့မတြက္ပဲ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ဗုံ းနဲ႕ အျခားလက္နက္ႀကီးေတြေတာ့ ရွိပါတယ္ ဒါေပမယ့္ PDF ေတြေနရာကိူ ေျခရာ မခံနိုင္ျခင္းနဲ႕ သိေတာင္ တိုက္စစ္ ထိုး စစ္မျပဳနိုင္တဲ့ မအလေတြကို နိုင္ဖို႔ဆိုတာ တကယ္ D Day စရင္ PDF က ေႂကြးေၾကာ္ထားသလို ၂လနဲ႕ အျပတ္ရွင္းနိုင္မည္ဆိုတာ က်ေနာ္ကေတာ့ ယုံၾကည္တယ္ဗ်ာ..
႐ုရွားေလယာဥ္ေတာင္ ေရဒါမနိုင္လို႔ ႐ုရွားေခၚေမာင္း ပါကစ္စတန္သြားသင္တဲ့ ေကာင္ေတြကို အနိုင္ရဖို႔ဆိုတာ မခဲရင္းပါဘူး ေနာက္ တ်ဳတ္က ဂ်င္းထားတဲ့ SY 400ဆိုတာလည္း ပ စ္မွတ္ ေသာက္တလြဲနဲ႕ လူေတြၾကလည္း ခုထိ တိုက္ခိုက္စြမ္းရည္မရွိ လက္နက္ႀကီးေတြ အသုံးျပဳကိုင္တတ္သူနည္းပါးၿပီး..
ပ စ္မွတ္လြဲတဲ့ တင့္ကားစုတ္ႀကီးေတြနဲ႕မို႔အေတြးမလြဲၾကနဲ႕ ဒီေအာင္ပြဲက က်ဳပ္တို႔ျပည္သူ ေသခ်ာကို နိုင္မယ္ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္ !!မင္းၾကည္ ညိုေန
– လေယာဉ်တွေ ရှိတယ်
– ဒရုန်းတွေရှိတယ် ဒါပေမယ့် နည်းပညာနဲ့ တကယ့်လုပ်နိုင်တဲ့ အတတ်ပညာမရှိသူတွေ ဖြစ်နေတယ်..
အကြောင်းက PDF တွေကို ဆိုက်ဝါးသတင်းနဲ့ ခဲပ စ်ပြီး ကြိုကြားလောက် လေးတွေပဲ သတင်းရသလောက်ဖမ်းနိုင်တယ် သူတို့ တကယ်သာ ဖမ်းချင်တယ် ဖြိုချင်တယ်ဆိူရင် PDF တွေ ရှိတဲ့နေရာကို စုံစမ်း ထောက် လှမ်းပြီး လေယာဉ်နဲ့ သို့ ဒရုန်းနဲ့ တခါထဲ ပ စ်ချလို့ရတယ်..
ထိုအတွက် သူတို့မှာ လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားနဲ့ နည်းပညာ အတတ်ပညာ မရှိတာ သေချာတယ်ဆိုတာ အေအေနဲ့ ပွဲမှာ လက်တွေ့ သိနိုင်တယ် အကြောင်းက အေအေ ဘယ်မှာ စခန်းအထိုင်ချနေတယ်ဆိုတာကိုတောင် ခုထိ မအလတပ်က သေချာ မသိဘူး သိလည်း နည်းပညာမရှိတော့ တိုက်မရဘူး။..
သူတိူ့အကြောင်းပြတာက အေအေတို့ ယခု PDF တွေဆိုတာ တောတောင်ထဲမှာမို့ မမြင် မထောက်လှမ်းနိုင်လို့ဟု အကြောင်းပြတယ် အမှန်တကယ်က ဘာမှမတတ်ကျွမ်းတဲ့ ကောင်တွေမို့ ဒီစကားပြောပြီး မလုပ်နိုင် အရေးနိမ့်နေတာပဲ ဖြစ်တယ်..
သဘောက အာဖကန်ကို US ဗူံ းတွေကျဲတုန်းက ကျောက်ဂူထဲမှာ ..ပုန်းအောင်းနေသူတွေကို ဖော က်ထွင်း လေဆာနဲ့ရှာဖွေပြီး ဂူနံရံတွေပါ ပေါက်ထွက်တဲ့ ဗုံ းတွေကို အသူံးပြုခဲ့ကြသလို အီရက်မှာ မီးလောင် ဗုံ းတွေနဲ့ တပြင်လုံး ကျဲချပြီး ရနိသူကို သုတ်သင် ရှင်းလင်းခဲ့ကြတယ် အဲ့လိုနည်းပညာနဲ့ လ က်န က်တွေ စကစမှာ မရှိဘူး သေ ချာတယ်။..
သို့ပေမယ့် လျော့မတွက်ပဲ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဗုံ းနဲ့ အခြားလက်နက်ကြီးတွေတော့ ရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် PDF တွေနေရာကိူ ခြေရာ မခံနိုင်ခြင်းနဲ့ သိတောင် တိုက်စစ် ထိုး စစ်မပြုနိုင်တဲ့ မအလတွေကို နိုင်ဖို့ဆိုတာ တကယ် D Day စရင် PDF က ကြွေးကြော်ထားသလို ၂လနဲ့ အပြတ်ရှင်းနိုင်မည်ဆိုတာ ကျနော်ကတော့ ယုံကြည်တယ်ဗျာ..
ရုရှားလေယာဉ်တောင် ရေဒါမနိုင်လို့ ရုရှားခေါ်မောင်း ပါကစ်စတန်သွားသင်တဲ့ ကောင်တွေကို အနိုင်ရဖို့ဆိုတာ မခဲရင်းပါဘူး နောက် တျုတ်က ဂျင်းထားတဲ့ SY 400ဆိုတာလည်း ပ စ်မှတ် သောက်တလွဲနဲ့ လူတွေကြလည်း ခုထိ တိုက်ခိုက်စွမ်းရည်မရှိ လက်နက်ကြီးတွေ အသုံးပြုကိုင်တတ်သူနည်းပါးပြီး..
ပ စ်မှတ်လွဲတဲ့ တင့်ကားစုတ်ကြီးတွေနဲ့မို့အတွေးမလွဲကြနဲ့ ဒီအောင်ပွဲက ကျုပ်တို့ပြည်သူ သေချာကို နိုင်မယ် အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် !!
လူငယ်တွေ အသ က်စွန့်ပြီး တော်လှန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်ဆိုတာ ကြားကောင်းအောင် ပြောကြတဲ့ စကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဒီဖြစ်ရပ်က သက်သေပဲ